Cappuccino iyo Beenleyda Baakadaha | Martech Zone
Cappuccino iyo Beenta Baakadaha
Isniin, Janaayo 12, 2009 Douglas Karr
Toddobaadkii hore waxaan u istaagay burrito McSkillet ah oo ku saabsan shaqada. Waxaan u maleynayaa inaan qoro qoraal kaliya sida aan ujeclahay kuwaas iyo Qdoba quraacda burritos, laakiin waan kaa badbaadi doonaa Intii aan joogay McDonalds, Xiiseynteyda ayaa sida ugufiican aniga ila heshay waxaanan dalbaday McCafe Mocha halkii aan ka joojin lahaa taayga dukaan kafee jecel.
Midabyo, calaamado casri ah iyo baakado leh codadka dhulka ayaa kugu hareeraysan waxayna kaa dhigeysaa inaad dareento inaad u kacayso makhaayadaha Yurub. Ma tihid, in kastoo. Waxaan si taxaddar leh u daawaday qofka ka dambeeya miiska oo riixaya badhamada midig, walaaqaya waxa ku jira, oo cabitaanka ka saaraya kareemka la shiiday iyo shukulaatada daadata.
Gaadhigii ayaan fuulay, kabashooyinkaygii kowaadna waan qaatay. Ma hubo waxa dhacay, waxaan aaminsanahay inay cilad ku timid mashiinka ama wax kale, laakiin waxay u dhadhamisay sida xabad xun oo loo yaqaan 'expresso shot' oo lagu daboolay kareemka darwiishka. Qiyaastii waan cabi karaa qaxwo kasta (waxaan ku jiray Ciidanka Badda wanaagga dartiis), laakiin waa inaan iska tuuraa. Dabcan, kooxahoodu ma ogaan karaan inay dhibaato jirto sidoo kale - wax kasta oo kayar inay ogaadaan hilibka lo'da wanaagsan. 😉
Waxaan leenahay a Starbucks sagxadda shaqadayda, markaa way adag tahay in qaxwada laga cabo ay soo dhaafto. Waxaan si gaar ah u jeclahay sharoobada basbaaskooda… sida awoowayaasheen ku ogaadeen in Coca-Cola ay leedahay cocaine, waxaan ka baqayaa inaan maalin uun ogaan doono in Starbucks Peppermint ay ku jirto wax sharci daro ah.
Starbucks waxay leedahay astaan ​​aad u cad, nadiif ah oo loo sheegi jiray dadka hareerahaaga ah, “Waxaan hayaa lacag aad u badan oo aan ku bixin karo $ 4 qaar ka mid ah digirta gubatay.”(Qaar ka mid ah asxaabteyda ayaa ugu yeera Afar bucks). Hoog, astaan ​​dhaqameedkii Starbucks ayaa bilaabay inuu libdho. Marar dhif ah ayaan ku dhuftaa safafka dhaadheer waxaanan dhaafi karaa Starbucks sida ugu fudud ee Saldhigga Gaaska oo leh kafee. Koobka wali waa mid qurux badan oo la kala sooci karo, in kastoo.
Bidixda bidix waa, laga yaabee, kafee aan jeclahay oo dhan. Saaxiibadayda wanaagsan Jason iyo Chris waxay leeyihiin dukaan weyn oo kafee ah, Koobka Bean agagaarka geeska gurigeyga.
Qaxwaha waxaa laga keenaa kafee lagu shiilo oo ka baxa Hamilton, Ontario. Kabbasho kasta, xitaa haddii ay kafeynin, wali waa mid aad u jilicsan, hodan ah oo kareem leh. Way adag tahay in la sharraxo farqiga u dhexeeya in digirta sida saxda ah loo dubay, dhulka, la dubay iyo uumiga la kariyey ay soo saari karaan dareere aan caadi ahayn iyo dusha xunbo xumbo leh. Baristas at Dukaanka kafee ee ugu fiican Indianapolis si taxaddar leh u cabbiro oo waqti u samee tallaal kasta si loo hubiyo in dhadhankiisu u sarreeyo. Badanaa, waxaan arkaa iyagoo daadinaya oo dib u rogaya digirta ilaa ay ka helayaan tallaalka saxda ah - mararka qaarkood qoyaanku wuxuu ciyaari karaa dhibaato.
Ma qarashka badan yihiin sida Starbucks oo aad ayey uga fiican yihiin (si jaban ugu fiican McCoffee), haddana koobku waa iska cad yahay oo cad yahay. Wax gaar ah malahan… waxa gudaha ku jira mooyee. Taasi waa waxa aan u imid inaan iibsado, miyaanay ahayn? Aniga do bixi waayo-aragnimada ay dukaanka ku siiso, sidoo kale! Qol badan, fiilo la'aan bilaash ah, iyo kuraasta raaxada leh.
Oh, beenta baakadaha! Ma qiyaasi karo inta lacag ee McDonalds uu ku bixiyay in la isku dayo in waxa koobka ku jira ay ka fiicnaadaan koobka ka baxsan.
Tags: jason dhacobadan spf domainrikoor badan spfwakaalada ppcdib-u-celintaraadinta spfdiiwaanka spfraadinta diiwaanka spfTV-ga
Blogger Haven for Black Hat SEO
Ganacsatada Iibsadayaashu way kala duwan yihiin!
Jan 12, 2009 saacadu markay ahayd 11:40 PM
Anigana waan la macaamili karaa kafee xun, laakiin waxaan dareemayaa sida Hooyo Motrin ah. Waxaan la joogaa Starbucks sababtoo ah waa meesha kaliya ee aan ka nasan karo shaqadayda oo ah mid diiran oo kuraasta raaxada leh leh xilliga qaboobaha. Khadadku way nuugaan, kafeega ma fiicna jawiguna wuu ka sii darayaa iyadoo ay carruurtu ku ordayaan sida xayawaanka yaryar.
Dukaamo wanaagsan oo madax-bannaan oo kafee ah ayaa aad ugu yar meelahaas. Laakiin, in yar ayaan hayaa oo si qaas ah ayaan u xanaaneeyaa. Nooloow koob aan calaamadeysneyn!
Jan 12, 2009 saacadu markay ahayd 11:47 PM
Ma hubisay Dukaamada Indie Coffee? Waxaa laga yaabaa inuu jiro mid ka dhow sidaad moodeysid!
Jan 13, 2009 at 8: 51 AM
FYI: Goobta Starbucks ee Broad Ripple, kafee weyn (hawo leh) waa qafis ka badan $ 2.00. Liiska Koobka Bean Cup ayaa sheegaya in isla lacagtu tahay $ 1.55. Waxaan u maleynayaa sheekooyinka koobka $ 4 inay ka yimaadaan suuqyada sida NYC.
Laakiin, post weyn Doug!
Jan 13, 2009 at 11: 03 AM
Aniguba sidoo kale, waxaan isku dayay makhaayadaha McBlech. Cillad ma aadan la kulmin. Waan ogahay taas maxaa yeelay waxaan siiyay seddex fursadood. Hal latte caramel-dhadhan fiican leh. Hal latte kulul Hal mocha kulul. Waxaan la yaabay sida xun ee ay runti ahaayeen. Haddii aan kafee kafee xun ku helo dukaan kafeega ah, dib ayaan u soo celin lahaa oo waxaan u sheegi lahaa inay mar kale isku dayaan.
Aad baan ula yaabi lahaa haddii qof caadeysto inuu qaxwaha kafeega-dukaanku beddelo uu beddelo. Xalkeyga: Waxaan iibsaday tayo hufan, laakiin mishiin qaali ah oo espresso ah. Shayga waxay u badan tahay inuu isagu isku bixiyay bil ama laba bilood. Hadda waxaan iskaa u sameeyaa sida saxda ah ee aan ugu doonayo qayb ka mid ah kharashka. Waad ogtahay waxa ay ka yiraahdaan doofaarka dharka ku jira.
Jan 13, 2009 saacadu markay ahayd 2:04 PM
Waxaan ku helay adiga @ swoodruff's Five's Morning.
Anigu ma ihi nin kafee cab ah laakiin waxaan ahay qof shaah cabba waxaana jira meelo ay magacyadooda “shaah” ku leeyihiin laakiin shaaha uraya.
Waan xiiseynayaa, ma dareemaysid inay khalad suuq ku tahay inaadan astaan ​​ku lahayn koobkaaga qaxwada?
Aan dhahno qofka X wuxuu aad ugu baahan yahay kafeega, waxay dhaafayaan qofka Y haysta koob kafee ah. Qofka X wuxuu weeydiinayaa qofkee Yuu kahelay kafee. Waxaa laga yaabaa in Qofka X uu ku xun yahay bixinta tilmaamaha, laga yaabee Qofka Y inuusan wax dareen ah u haynin jihada, laga yaabee inuu Qofka Y uusan si fiican ugu hadlin Ingiriisiga, sidaa darteed Qofka Y ay dhibaato ku tahay inuu helo dukaan kafeega ah. Haddii koobka kafeega maran uu dhab ahaan lahaa astaan ​​Qofka Y wuu ogaan lahaa waxa la raadinayo.
Aynu u dhaqaaqno tusaalaha khamriga. Waan xasuustaa magacyada khamriga qaarkood laakiin dhammaantood maahan. Markaan u tegayo inaan soo iibsado khamri, waxaan ku jiraa aragtida sumadaha caanka ah.
Waxaan aaminsanahay in calaamaduhu ay muhiim yihiin oo ay qalad tahay inaadan ku calaamadin sheygaaga astaantaada.
Jan 13, 2009 saacadu markay ahayd 8:30 PM
Saaxiibbo ahaanshaha Koobka Bean, waxaan hubaa inaysan lahayn astaan ​​si fudud qarashyada koobabka awgood. Waxay doorbidi lahaayeen inay lacagta ku qarash gareeyaan digir aad u weyn waana ku faraxsanahay taas!
Waad ku mahadsan tahay Steve xuska waxaan rajeynayaa inaad dhaqso u soo laaban doonto!
Jan 14, 2009 at 12: 00 AM
Aaway koobkan Bean ah ee aad ka hadlayso? 😉
Jan 14, 2009 saacadu markay ahayd 11:44 PM
Qoraal aad u xiiso badan. Sidoo kale inaad tahay taageere dukaanka kafeega aad ugu jeceshahay ayaa ka dhigaysa xitaa xiiso badan sidoo kale. Waan ku raacsanahay, waxaan u maleynayaa in astaan ​​laga yaabo inay caawiso Koobka Bean, laakiin sidoo kale waxaan u maleynayaa inaysan u qalmin qiimaha lagu sameeyo. Tusaalaha kor ku xusan, waxaan u maleynayaa in Qofka Y uu si fudud oo dhaqso leh ugu ogeysiin lahaa Qofka X inuu ogaado halka uu ka keenay koobkii weynaa ee kafeega iyo sida saxda ah ee uu ku tagayo. Waxaan sidaa u idhi maxaa yeelay hal shay oo aan ogahay ayaa ah inaan si sax ah u qabtay tan marar badan.